Manao akanjo vita amin'ny lamba rongony
Dress - iray amin'ireo tsy maintsy-akanjo akanjo maoderina. Mpanakanto maro no manizingizina fa ity singa ity no voalohany amin'ny lisitry ny gara tsy maintsy atao. Ary tsy natao fotsiny ho an'ny arsenal ny fivoahana na ny hariva hariva, fa koa amin'ny fiainana andavanandro. Mandritra izany fotoana izany, ny tontolom-pitaovana farany dia atolotry ny mpanakanto rehetra manerana izao tontolo izao na avy amin'ny fitaovana tsara tarehy, izay mamela ny zazavavy hijery tsara tarehy, mendri-piderana ary mahazatra isan'andro. Ankehitriny, iray amin'ireo fiakanjo ireo dia afaka manavaka ny akanjo amin'ny lamba lamba. Karazana biby inona ary inona no fihinanan-tsakafo - aoka hojerentsika izany?
Ny akanjo amin'ny lamba vita amin'ny lamba lamba amin'ny gidro voalohany dia tahaka ny alina iray alina. Ankoatr'izay, tsara kokoa ny miantso azy io ho marika. Ny modela dia vita amin'ny hazavana mamirapiratra - silk, satina. Ny singa malaza ao amin'ny akanjo tsy voafehy amin'ny akanjo dia ny fisian'ny dantelina vita. Na dia ny loko tokana avy amin'ny fitaovana iray ihany aza no lamaody. Ny mpanamboatra, amin'ny fitsipika, dia manamboatra akanjo mofomam-paty, décolleté zone, harnesses. Ny modely dia mety amin'ny rantsantanana lava, ary amin'ny lamosina matevina. Ny akanjo amin'ny lamba rongony - ity dia fahafahana hameno ny sarin'ny andavanandrom-piainanao amin'ny lozam-pifaliana, ny maha-lahy sy maha-vavy, ny fahamendrehana.
Ny marika malaza indrindra, maneho karazana fiakanjo ao amin'ny lamba lamba, amin'izao fotoana izao ny orinasa Zara Espaniola. Ny mpahaikanto dia nisafidy ny fananganana fototra ho an'ireo modèl'ny vehivavy sy maivana amin'ny loko mainty malaza sy ny loko manga amin'ny inky manga. Ny fihenan'ny endrika mitovy amin'izany dia laconic, amin'ny ankapobeny, mivantana na trapezoid ary tsy miseho ho toy ny singa fototra mahasarika.
Amin'ny inona ny manao akanjo amin'ny lamba rongony?
Ny akanjo amin'ny lamba vita amin'ny lamba rongony dia safidy tsara indrindra ho an'ny orinasa ara-barotra, ary koa akanjo ho an'ny fivoahana. Ny modely marefo toy izany dia mifamatotra tanteraka amin'ny akanjo japoney sy kiraro amin'ny sambo. Ny sandany amin'ny kitapo, ny akanjo vita amin'ny akanjo ary ny akanjo hoditra ihany koa dia ho toy ny sarivongana miavaka amin'ny sary miaraka amin'ny akanjo vita amin'ny lambam-paty.
Ny modely amin'ny lamba lamba dia tsara tarehy amin'ny akora lehibe - kofehy feno lafaoro, kavina be maromaro na kiraro, kitapo kely. Na dia ny singa farany amin'ny sary aza dia tena tsy miorina amin'ny toro-hevitra amin'ny stylist. Ny modelim-bolo sy ny kapoakan'ny laconic dia hanampy amin'ny famolavolana tsipika maingoka sy mahavariana.
Akanjo lava misy lavaka 6
Hiantsena any Amsterdam
Feno fahavaratra mandritra ny fahavaratra
Lamina lava amin'ny tany miaraka amin'ny akanjo
Ny rivodoza vehivavy - ny sarin'ireo sary amin'ny modely modely sy modely amin'ny vanim-potoana vaovao
Ny boots Women's dutiki
Adidas ririnina ho an'ny vehivavy
Cape ho an'ny akanjo hariva
Ankolafy kiraro amin'ny kirany
Mpilalao baolina kitran'ny Adidas
Rahoviana ny handavaka ny gliiolioli sy ny fomba hitehirizana azy ireo?
Ny voa kisoa - tsara sy ratsy
15 ny fanentanana dokam-barotra indrindra amin'ny marika lamaody amin'ny taona 90
Fashion Trends - Autumn-Winter 2015-2016
Aiza no hanasoketana ny sofin'ny zazakely?
Mamina zava-tsarobidy ho an'io zazalahy io - kilasy maoderina mitaiza
Tandrok'alona - tsara sy ratsy
Modely amin'ny akanjo ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny kibo lava
Ireo mpitaingin-tsoavaly ririnina